के तपाइँको भिडियो विज्ञापनहरू देखिएको छ? | Martech Zone
भिडियो पृष्ठमा सबै विज्ञापनको आधा भन्दा बढि वेबमा देखिएको छ, मार्केट गर्नेहरूका लागि एउटा कठिन अवस्था जुन यन्त्रहरूमा भरपर्दो भिडियो दृश्यताको फाइदा लिने आशा गर्दछ। यो सबै खराब समाचारहरू होइनन् ... आंशिक रूपमा सुन्नुहुने भिडियो विज्ञापनको पनि यसले प्रभाव पारेको छ। गुगलले तिनीहरूको डबलक्लिक, गुगल र यूट्यूब विज्ञापन प्लेटफर्महरूको विश्लेषण गर्‍यो कि ती भिडियो विज्ञापनहरूको अवलोकन योग्यता निर्धारण गर्न कारकहरू पहिचान गर्न प्रयास गर्न।
देख्न सकिने कुराको के हिसाब छ?
अन्तर्क्रियात्मक विज्ञापन ब्युरोको साथ संयोजनको रूपमा मिडिया रेटिंग काउन्सिल (एमआरसी) द्वारा परिभाषित गरेको कम्तिमा दुई लगातार सेकेन्डको लागि पर्दामा कम्तिमा 50०% पिक्सल पर्दामा देखा पर्दछ जब एक भिडियो विज्ञापन हेर्न मिल्छ।
दृश्यले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूले उपभोक्ता व्यवहार, उपकरण, पृष्ठ रूपरेखा, प्लेयर आकार, र पृष्ठमा विज्ञापनको स्थिति समावेश गर्दछ। गुगलको हेर्नुहोस् पूर्ण अनुसन्धान रिपोर्ट कि यो इन्फोग्राफिक प्रेरित। यसमा अनुसन्धान किन गरिएको थियो, कार्यप्रणाली, देशद्वारा अवलोकन योग्यता, र अन्वेषणहरूमा थप विवरण समावेश छ।
टैग: Google +IABअन्तर्क्रियात्मक विज्ञापन ब्यूरोमिडिया रेटिंग काउन्सिलmrcभिडियो विज्ञापन दृश्यताभिडियो विज्ञापनहरूYouTubeयूट्यूब विज्ञापन
तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग परिणाम सुधार गर्न। चरणहरू
मई 29, 2015 मा 2: 05 PM
धेरै सुन्दर! तपाईंको इन्फोग्राफिकले मूल गुगलको रिपोर्टलाई राम्रोसँग समेट्दछ। म वास्तवमै उत्सुक छु कि तपाईंले कुन इन्फोग्राफिक कम्पनीको साथ काम गर्नुभयो?
मई 31, 2015 मा 1: 49 एएम
गौतम, यो इन्फोग्राफिक Google द्वारा आन्तरिक रूपमा गरिएको थियो। यद्यपि DK New Media शानदार इन्फोग्राफिक्स गर्दछ। मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं केहि जानकारी चाहानुहुन्छ भने।